Psst! ဟေ့ Buddy အနည်းငယ်နှစ်ကောင်တယ်? ဒီရုပ်ရှင်ကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပါ။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
Psst! ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy အနည်းငယ်နှစ်ကောင်တယ်? ဒီရုပ်ရှင်ရန်ပုံငွေ!
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နုတ်ထွက်ပါပြီ။ ဤသည်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဟာသူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းပြောပြလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဦးဆောင်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်၎င်းတို့၏သုတေသနပြုမှုအဖြစ်သူတို့၏အသက်တာ၏နှစ်ပေါင်းများစွာ porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တဦးတည်းမှာထိုကဲ့သို့သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, တစ်ဦးကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်များနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူ orgasm မှနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအဖြစ်လက္ခဏာတွေထဲကနေဆင်းရဲခံရဖို့စတင်ခဲ့တဲ့သူငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် feature ပါလိမ့်မယ်။ ယနေ့အထောက်အကူပြုနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်လက်ဆောင်တွေတစ်အကွာအဝေးရ!
REWIRED လူ့ဦးနှောက်အပေါ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများအကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုဦးဆောင်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်၎င်းတို့၏သုတေသနပြုမှုအဖြစ်သူတို့၏အသက်တာ၏နှစ်ပေါင်းများစွာ porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တဦးတည်းမှာထိုကဲ့သို့သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, တစ်ဦးကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်များနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူ orgasm မှနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအဖြစ်လက္ခဏာတွေထဲကနေဆင်းရဲခံရဖို့စတင်ခဲ့တဲ့သူငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် feature ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားငယ်ရွယ်လူကြီးများ (အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ) porn အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်ယုံကြည်ကြသည်။ REWIRED ဘို့သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရီးကိုယူပါလိမ့်မယ် - နောက်တဖန် porn ကိုကြည့်ဘယ်တော့မှသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးကတိကဝတ်မှတက်နှင့်ချိတ်ဆက်တဲ့မှ။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်လက်ရှိတွင် porn စားသုံးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူထိခိုက်ဘယ်လိုအတိအကျထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ သူတို့က MRI-လေ့လာမှုများ, စမ်းသပ်လေ့လာမှုများနှင့်မေးခွန်းပို့ချလျက်ရှိသည်။ REWIRED စိတ်ပညာ, neuropsychiatry, urology နှင့် sexology လယ်ထဲကနေလာသူကိုမှတ်သားလောက်သိပ္ပံပညာရှင်များ၏လုပျငနျး feature ပါလိမ့်မယ်။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အလယ်ပိုင်းအထိလူအများစုအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဆယ်ကျော်သက်တိုင်းနီးပါးသည်အခမဲ့နှင့်စီးဆင်းနိုင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရရှိနိုင်သည်။ အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းသောအစာစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါလက္ခဏာများကိုခံစားနေရသူများသည်ဤရောဂါလက္ခဏာများ၏မူလအစကိုမကြာခဏပျက်ကွက်ကြသည်။
ယခုအခါအထူးပြုထားသည့်အင်တာနက်ဖိုရမ်များမြောက်မြားစွာရှိနေပြီးထိခိုက်နစ်နာသူများသည်အလားတူပြreportနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပို့ပြီး၎င်းတို့အား၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဤဖိုရမ်များထဲမှတစ်ခုကို NoFap ဟုခေါ်ပြီးယခုလက်ရှိအဖွဲ့ဝင် ၁၄၀.၀၀၀ ကျော်ကအသုံးပြုနေကြသည်။
အဲဒါက ... ဖြစ်ပါလိမ့်မည်:
1 ။ ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်အစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းအရှိဆုံးကျယ်ပြန့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (60 - 90 မိနစ်ကြာမြင့်စွာ)
2 ။ သိပ္ပံနည်းကျအချက်အလက်များများကအသိပေး
3. လွတ်လပ်စွာထုတ်လုပ် & စိတ်လှုပ်ရှားမှုအခမဲ့
4 ။ ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားလှုံ့ဆျောမှုကနေအခမဲ့
5 ။ ညစ်ညမ်း၏ဝေဖန်မှုများနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှအခမဲ့
7 ။ အခမဲ့ဖြစ်ပေါ်
REWIRED အတွက် featured ပါလိမ့်မည်သူကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်း
ငါတဆယ်နှစ်နှစ်အရွယ်ရှိ၏သောအခါ "အရာကယ့်ကိုဆိုးရွားတယ်။ ကျွန်မရဲ့မိဘတွေမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကရတယ်အခါပါပဲ။ အဘယ်သို့ငါပြုပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါသည်: ငါအလယ်တန်းကျောင်းမြို့မှ ထွက်. နှင့်မြန်ငါတတျနိုငျသအဖြစ်အိမ်ပြန်နှင့်ညစ်ညမ်း watch, ကျွန်မရဲ့မိဘတွေအိမ်မှာအလုပ်ကနေရတယ်မတိုင်မီသုံးလေးနာရီသမျှငါတတျနိုငျသကိုကြည့်မယ်လို့ "။
ဒံယလေသ Simmons, 22:
"ကျွန်မရဲ့ရည်းစားနဲ့အတူသည့်အခါတစ်ဦးစိုက်ထူမခံမရပ်နိုင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကအရမ်းအားနည်းနေလိမ့်မည်။ ငါ၏အညစ်ညမ်းစွဲစဉ်အတွင်းကျနော် asexual ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ porn နှင့်အတူဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခဲ့ပေမယ့်ငါလူသားတွေနဲ့အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ "
နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, 25 BE:
"ကျွန်မအင်တာနက်ကိုရှာဖွေငါသူတို့တီထွင်ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အကြောင်းပြောနေတာ, ငါကဲ့သို့သောယောက်ျားတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုသူတို့ကိုငါတယောက်တည်းမဟုတျကွောငျးကို သိ. မိုင်းများကဲ့သို့သိပ်ခဲ့ကြသည်ကိုသိမြင်လျှင်, ဤပုံပြင်များဖတ်ပါ။ ထိုငါ့ကိုပယ်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားအလေးချိန်ရုပ်သိမ်း။ "
စာရေးဆရာနှင့်“ Your Brain On Porn” ကိုတည်ထောင်သူ Gary Wilson -
“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုရဲ့ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်သဘောတူညီမှုမရသေးတာလဲဆိုတာကိုသင်စဉ်းစားနေရင်သတိပေးမှုတွေများနေပေမယ့် Tobacco Wars ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကနေသင်ခန်းစာယူလို့ရမယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကလူအများစုသည်ရုပ်ရှင်မင်းသားများအပါအ ၀ င်ဆေးလိပ်သောက်ကြသည်။ ပြည်သူ့ puffing ကိုချစ်၏။ ၎င်းသည်အာရုံကြောများကိုအေးဆေးစေပြီးကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့် buzz ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဘယ်လိုထိုကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်လှုပ်ရှားမှုနိုင်ဘူး အမှန် ထိခိုက်လိမ့်? နီကိုတင်းခဲ့ အမှန်တကယ် စွဲလမ်းစေ? အဆိပ်ထဲတွင်အဆီများထွက်ပေါ်လာသောကတ္တရာစေးသည်မမျှော်လင့်သောဆေးလိပ်သောက်သူများသည်ကတ္တရာကိုအပြစ်တင်ရန်ပိုနှစ်သက်ကြသည်။
ဒေါက်တာဆီမှKühn, စိတ်ပညာရှင်, လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေး, ဘာလင်များအတွက်မက် Planck အင်စတီကျု, ဂျာမနီ:
ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်တွင် striatum သို့မဟုတ် caudatum ဟုခေါ်သောဖွဲ့စည်းပုံသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစားသုံးသူများအတွက်သေးငယ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး၎င်းသည်အချိန်မည်မျှကုန်သွားသည်ကို မူတည်၍ အမှန်တကယ်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျုံ့သွားနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ထိုသူသည်ဆုလာဘ်ခံစားမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ပိုမိုပြင်းထန်လာရန်နှင့်မကြာခဏလှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်သည်။ ”
ဒေါက်တာ Valerie Voon, neuropsychiatrist, ကင်းဘရစ်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏တက္ကသိုလ်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပြုလုပ်နေသည့်လူနာများနှင့်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအကြား ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုတွင်ရှင်းလင်းစွာကွဲပြားမှုရှိသည်။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုများသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ထင်ဟပ်ချက်ကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ”
ပါမောက္ခဒေါက်တာဿိအမှတ်တံဆိပ်, စိတ်ပညာရှင်, Duisburg-အက်ဆင်း၏တက္ကသိုလ်, ဂျာမနီ:
“ … အကယ်၍ သူတို့သည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုအသုံးပြုမှုမှစိတ်ကျေနပ်မှုကိုရရှိနိုင်ပါကတစ် ဦး ချင်းစီသည် CA (cybersex စွဲ) ဖွံ့ဖြိုးလာရန် ပို၍ အားနည်းလာနိုင်သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု (သို့) အဆင်မပြေမှုများကိုလျှော့ချရန် CA ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောယန္တရားတစ်ခုဟုယူဆနိုင်သည်။ ”
... နှင့်များစွာသောပိုပြီး! (ဥပမာ - ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး၊
ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပညာပေးကူညီ ကျေးဇူးပြု. - သင့်ထောက်ခံမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ပြီးခဲ့သည့်ငါးလအတွင်းမှာတော့ကျနော်တို့ REWIRED များအတွက်သုတေသနပြုထားပြီးဘာလင်ဒေါက်တာဆီမှKühnနဲ့ Daniel Simmons နှင့်အတူပစ်ခတ်။
$ 35,000 ရန်ပုံငွေရည်မှန်းချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာငှားရမ်းခပေးရမယ့်ငွေပမာဏနဲ့ REWIRED ကိုထုတ်လုပ်နေတုန်းလက်ရှိလည်ပတ်နေသောကုန်ကျစရိတ်များ မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ငွေပေးချေမှုကိုမတွက်ဆခဲ့ပါ။ ဤစီမံကိန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အခြားပံ့ပိုးသူများမရှိပါ။
ကျနော်တို့အောင်မြင်စွာ $ 35,000 ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိပါလျှင်သာသင့်ရဲ့အလှူငွေလက်ခံရရှိမည်!
အဆိုပါ Post-ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးဖွယ်ရှိယခုနှစ်အကုန်တွင်ပြီးဆုံးလိမ့်မည်။ REWIRED ၏ဒစ်ဂျစ်တယ် download, ပထမဦးဆုံးရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဲဒီနောက်မကြာခင်ကျနော်တို့ DVDs နဲ့ Blu-ray ထုတ်တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်ချိန်, ငါတို့သည်လည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသိပညာပေးတစ်ခုကျယ်ပြန့်ပရိသတ်ကိုအဘို့အ REWIRED ရရှိနိုင်ပါစေချင်ပါတယ်။
- မင်းက T-shirt ကိုမှာထားတယ်။ ငါတို့မင်းရဲ့တီရှပ်ရဲ့အရွယ်အစားကိုသိဖို့လိုတယ်။